Poltava - guta guru kudzidza mushonga muUkraine Europe
Poltava iguta kuUkraine uye muzinda Poltava nharaunda. Zvinonzi rakamiswa pamusoro North-East wenyika yedu, pamusoro Pridneprovskaya yamapani uye riri pamahombekombe erwizi Vorskla. Wokutanga inonzi Chinyorwa pamusoro guta yomusi vari XII remakore. Sezvo 27-fung, February kusvikira 3-d, Chikumi 1925 yaiva muzinda Poltava dunhu. Guta rine pachake chenyika yacho uye mureza. Poltava chinhu nemagariro muzinda unokosha uye hombe senga nodal pfungwa. Muchivara cheguta iri 104.42 km² uye rakakamurwa 3 chikuru maruwa (Oktyabrskiy, Kievskiy uye Leninskiy). Vagari reguta anenge 300,5 vanhu zviuru. Masangano omunzvimbo hurumende dzinoturwa neguta kanzuru yeko uye musoro muguta (meya).
Poltava riri kuEastern chikamu Europe, mu 301 ? km kuMabvazuva kusvikira Kiev.
Geographical Coordinates: 49° 00`35“N 34 ° 00`33“E, 140 M pamusoro-pegungwa. Guta iri Pridneprovskaya yamapani uye riri parwizi Vorskla mabhanga. Mumwe dzorwizi feeder ndiye Kolomak inoyerera kupinda Vorskla mukati muguta. wo, mukati paberere pakati Poltava varipo vamwe kwete guru dzinongoitika madhamu uye zvakawanda chakagadzirwa madziva. City rokuyamura, kazhinji, kunyange, asi pamusoro nhambwe 1,5 ? km kubva parwizi munhu anogona kuona unopinza materu (Vorskla kodzero bhengi, apo Poltava riri - zvikuru unopinza, zvikomo kukwirira ukwire 80-100 that m hwakanyatsorwisa parwizi pamwero). Geographical chinzvimbo Poltava ari nani zvinobatsira uye mukufamba nhoroondo zvikuru guta kukura. Poltava anomira anokosha chaizvo senga Makwara. guta redu rinopa kutaurirana basa pakati mukuru maguta muUkraine: Kiev, Kharkov uye Dnepropetrovsk.
Vakawanda guta redu okunze unozvidzora, Continental vane chilli chando uye ushamwari (dzimwe nguva kuchipisa muzhizha). Avhareji tembiricha muna January maererano-yakareba zvaakacherechedza ndiko 6.8 dhigirii chilis pazasi razero. Summer unodziyirwa uye chakaoma. Mwedzi Hottest ndiye July, semutemo. Avhareji tembiricha muna July ndiro 20.9 dhigirii chilis kumusoro razero. okupedzisira 100 - 200 makore tembiricha iri Poltava, uyewo yose World, ane tsika kuwedzera. Munguva he nguva ino avhareji tembiricha wepagore ikawanda anenge ari 1,5 ° C. The achizviita nomutsa kwakaratidza gore, maererano-refu rucherechedzo, raiva gore 2010. The zvikuru kuwedzera tembiricha zvakaitika mwedzi mitanhatu yokutanga. In Poltava, avhareji yegore negore mvura inonaya iri 569 mamirimita (mudukusa muna February - March, kupfuura zvose - muna July). Ose chando pane chando butiro, kufadza kukwirira uko kazhinji kuchengetwa February. Avhareji hama mwando ndiko 74%, mudukusa muna May (61 %), kupfuura zvose muna December (88 %).
Maererano vehurumende nenhamba pamusoro 1-ST, Ndira 2010, yevagari weguta rainzi 300, 5 vanhu zviuru. Yakanga wakaderedzwa kusvika 14 vanhu zviuru tichienzanisa gore 1989 - Uye hachisi chakarurama kuipa, kufungisisa wevanotungamirira ezvinhu muUkraine (semuyenzaniso, vagari Lvov kuderedzwa kusvika 57 vanhu zviuru nokuti iyi nguva). Poltava vanogara arambe achirema kunopfuura 3000 por km². 87% vokuparidzira guta ndivo Ukrainians; 44, 0% zvakaoma-achishanda vemo vanobatanidzwa kupinda Industrial bhora; 16, 0% - Kupinda pabasa bhora; 6, 0% - Kupinda sainzi, unyanzvi uye dzidzo.
Poltava chakakura chokufambisa North-East nodal kutosvika muUkraine. guta redu inzvimbo, apo zvinokosha njanji nezvemakwara mikuru vari intersected. Pane guru uye dzakabudirira mabhazi Network. Poltava chinokosha nhumbi motokari centre. It riri panzira huru mazambuko kunobatanidza Western uye Eastern mativi Europe. Poltava hwakasungirirwa pamwe Kiev, Kharkov, Dnepropetrovsk, Sumy uye Kremenchug nokuda mikuru.
Kune vakadaro motokari achadzinga kuti vaende kuburikidza Poltava:
E 40 - Kiev-Kharkov mugwagwa (kutungamirira Eastern - Chutovo, Kharkov; Western divi - Horol, Lubny, Kiev);
H-12 - National motokari mumugwagwa (Kotelva, Ahtirka, Sumy);
M-22 - International motokari mumugwagwa (Kremenchug).
Nokuti mutakurwi zvifambiso vakadaro voruzhinji conveyances anoshandiswa: dzemagetsi - Trolley-mabhazi; Motor senga - mabhazi, minibuses, mutakurwi tekisi. Pane chemabhazi musi Velikotyrnovskaya mumugwagwa, pedyo Kiev-Kharkov mugwagwa (E40) apo munhu anogona kuenda padzimba kuUkraine uye Europe. wo, pane weruwa bhazi dzemapurisa musi Dzhafarova uye Zenkovskaya dzomumisha. wo, pane vaviri njanji dzemapurisa muguta (Kyivska uye Pivdenna nhepfenyuro). Railway Makwara kubatanidza Poltava pamwe Kiev, Kharkov, Kremenchug, Lozovaya uye Krasnograd. Kiev-Kharkov nzira iri yakafadza uye rinopa nzira rokutsanya vakasununguka nezvitima. Magetsi pamusoro njanji mutsetse Poltava - Kharkov rakapera muna August 2008.
Pane 12 yepamusoro establishments dzidzo iri nharaunda guta redu. Vari: Ukrainian zvokurapa stomatological chikoro, Poltava State Agrarian Academy, Poltava National rwokugadzirwa University ainzi pashure Kondratyuk, Poltava National Pedagogical University ainzi pashure Korolenko, Poltava University of Economics uye Trade, Poltava University of Economics uye Mutemo; uyewo pane zvaari zvakadaro: National Academy of Mutemo muUkraine ainzi pashure Y. Mudryi, Interior hwoUmambo University, ari Interregional Academy of Revashandi Management, International European University, Kiev National University of Culture uye Art, National muruzivo rwokugadzira Universityof Ukraine "Kharkiv Polytechnicak Institute", Poltava Business Institute, ari Academician Yuriy Bugay International Scientific uye Technical University. Muguta redu pane 52 vakawanda dzidzo establishments uye 54 kuenda kukireshi nemasangano, pakati iyo: 14 itsva mhando nemasangano (Zvikoro guta uye dzokurovedza muviri). 2 chaiwo zvikoro mupfungwa kana mumuviri remara mbudzana. 1 chikoro manheru. 5 masangano dzidzo.
Poltava ane anoshamisa zviwanikwa, dzakakodzera zveupfumi uye nenzvimbo nechinzvimbo. Ndokusaka ari munharaunda yayo pane emakambani akawanda, kushandisa mafuta, chikafu, chiedza uye kuveza mumaindasitiri. Poltava riri kure huru metallurgia, muchina kuvaka nzvimbo kwesayenzi sezvo Kiev, Kharkov, Dnepropetrovsk kuti nyasha kukura muchina kuvaka uye makemikari mumaindasitiri. guta redu unopa 1/4 pamusoro Industrial nharaunda Kugadzirwa.
Last update:26 Chivabvu 19